We.com.mm - BMW တွေလည်း ခဏထား။ Mercedes တွေလည်း အသာနေ။ ဒီမှာ ထူးခြားဆန်းပြားလွန်းတဲ့ ရှေးဟောင်းကားလေးတွေလာနေပြီ…
BMW တွေလည်း ခဏထား။ Mercedes တွေလည်း အသာနေ။ ဒီမှာ ထူးခြားဆန်းပြားလွန်းတဲ့ ရှေးဟောင်းကားလေးတွေလာနေပြီ…
ခုခေတ်လူကြီးမင်းတော်တော်များများဟာ BMW မှ Mercedes မှ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အားလုံးက သူတို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဒီလို အသွင်မတူ တမူထူးခြားလွန်းတဲ့ ကားလေးတွေကို မေ့နေကြတာအမှန်ပါပဲ။ စာရေးသူတောင် စစတွေ့ချင်း “အိုး ...ဝိုး.... ဘယ်လိုတွေလား ဘာဒီဇိုင်းတွေလဲ” ဆိုပြီးတော့တောင် အံ့သြသွားတာလုံးဝအမှန်ပဲ။
ကောင်းပါပြီ အဲဒါဆို အောက်ဖော်ပြပါ “Weird Cars” တွေကို တချက်ရှိုးကြည့်လိုက်တော့….
၁၉၄၂ ခုနှစ်က Oeuf Electrique
ဒီကားလေးကတော့ ပြင်သစ်နိုင်ငံကပဲဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင် “Electric Egg” လို့တင်စားခြင်းခံရပါတယ်။ ဒီဇိုင်းရော၊ ထွင်ထားတဲ့ပုံစံရော အိုး...ဝိုး..... အရမ်းမိုက်တယ်လို့မြင်ရပါတယ်။ ဒီကားလေးဟာ အရင်တုန်းက မီးရထားသံလမ်းတွေမှာ ဒီဇိုင်းနဲ့ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ Paul Arzens ဆိုသူက ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့ပါတယ်။ အလူမီနီယမ်နှင့်ဖန်ကို သုံးစွဲပြီး တီထွင်ထားတာပါ။ မောင်းနှင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း ဘက်ထရီကိုသာ အသုံးပြုတယ်လို့သိရပါတယ်။
၁၉၅၉ ခုနှစ်က Cadillac Cyclone
ပုံမှန်ဆို ကားမီးသီးထားရမည့်နေရမှာ အမည်းရောင်အပေါက်တွေကိုသတိထားမိမှာပါ။ အဲ့ဒါတွေက ကားတိုက်တဲ့အခါရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ ရေဒါစနစ်ပါပဲ။ ဒီကားက သူ့အရှေ့မှာ အရာတစ်ခုခုလာတယ်ဆိုတာကို ဖမ်းမိတာနဲ့တပြိုင်တည်း အချက်ပေးမီးတွေ၊ beep ဆိုတဲ့ အချက်ပေးအသံတွေ အကုန်ပွင့်လာပြီး သတိပေးပေးမှာဖြစ်သလို၊ ဘရိတ်ကိုပါ အော်တိုအသုံးပြုပေးမှာဖြစ်ပြီး ကားတိုက်မှုဘေးအန္တရာယ်မှကင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၄၇ ခုနှစ်က Norman Timbs Special
ဒီကားလေးကတော့ Indy ပြိုင်ကားရဲ့ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်သူ Timbs က တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပုံစံ ကတော့ မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ အံ့မခန်းလွန်းပါတယ် ။ တခြားကားတွေဟာသူ့ရဲ့ Design ကြောင့်သူ့ကို ယှဉ်လို့မရပါဘူး။ အရှေ့ဘက်မှာခုံးပြီး၊ အနောက်ပိုင်းတွေမှာ ကွေးသွားတဲ့ ပုံစံကြောင့် မိုးရေစက်ပမာ လှလွန်းပါတယ်။
ဒီကားလေးကတော့ ၁၉၇၀ ခုနှစ်မှာ မိတ်ဆက်ခြင်းခံရပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးမှာကျတော့ Sunrise ရဲ့ Badal လို့သိထားကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာကြတော့ Sipani ကိုရောင်းလိုက်တဲ့အတွက် Sipani Badal ဆိုပြီးတော့ လူသိများသွားတာဖြစ်ပါတယ်..။ ဒီလိုပုံစံတူ ကားကတော့ ကမ္ဘာ့နာမည်ကျော် ဟာသသရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ Mr.Bean ရဲ့ Series တွေမှာလည်း တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်ရဲ့ Tasco
ဒီကားကတော့ The American Sports Car Company မှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး၊ ဒီဇိုင်းပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ Gordon Buehrig ဆိုသူဟာ World War II ဇာတ်ကားထဲက တိုက်ခိုက်ပေးတဲ့ လေယာဉ်ပုံစံကို မှီငြမ်းပြီး ဒီဇိုင်းယူဖန်တီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
Iso S.p.A ရဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့လန်းနေတဲ့ ဒီကားလေးဟာ တခြားကားတွေနဲ့ လုံးဝကို ပုံစံကွဲထွက်နေပါတယ်။
အီတလီနိုင်ငံမှာ ထုတ်လုပ်ထားသော်လည်း တခြားနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ယူကေ ၊ ဘရာဇီးတွေမှာလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒီကားလေးကတော့ ကားအသေးတွေထဲက အသေးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပုံစံကတော့ မိုက်ပေမယ့် တခြားကားတွေနဲ့တော့ ယှဉ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူက တစ်ယောက်စာအတွက်ပဲ စီးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ကို ဂရုမစိုက်တဲ့သူကို ဘယ်လိုမေ့ပစ်မလဲ?
သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ Date မလုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၅) ချက်
သင့်ကိုအရည်ပျော်သွားစေမယ့် Supermarket က ပန်ဒါအရုပ်လေးမှာရှိနေတဲ့ စာတန်းလေး…။
Baby လေးရဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဖေဖေ မေမေ တို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ
ဒီလို စိတ်ထားမျိုးရှိတဲ့ ယောက်ျားလေးနဲ့ ဘယ်တော့မှ လက်မထပ်ပါနဲ့
ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူများကို ကုသရန် ခုတင်တစ်ထောင်ဆန့်ဆေးရုံကြီး တစ်ပတ်အတွင်းတည်ဆောက်မည်
3 months ago by Gabriel
12 months ago by Gabriel